Fundraiser by Habtamu Lamu : Kennaa altokkichaa miidiyaa ‘’Qaanqee Show’tiif
Kennaa altokkichaa miidiyaa ‘’Qaanqee Show’tiif
$9,807 raised of $10,000 goal
Habtamu Lamu is organizing this fundraiser.
Kabajamtoota daawwattoota ‘Qaanqee Show’, waggoota jahan darbaniif ofirratti hirkannoo guutuun gama miidiyaa ‘Qaanqee Show’tiin, ammammoo Sagantaa ‘Gingilchaa’ jedhamu jalatti banuun isin bohaarsaaf barsiisaa jiraachuunkoo hundumaaf ifa. Dhiyeenya kana ammoo akka malee carroomuun Saatlaayitii bilisaa argachuun gamaa ‘Gadaa Bilisumma Channel/GBC’ jedhuun Oromiyaa hundaafi baha Afriikaa maratti sagantaa kana dabarfachuukoo keessumattuu uummanni keenya miidiyaa hawaasaafi Interneetiirraa fagoo jiru gammachuusaa ibsataa jira. Kana dura sagantaan kun gama Yotube’fi Facebook’ qofaan Kan darbaa ture amma garuu daawwattoota hedduu argateera.
Haata’u malee, Saatlaaytiirratti qophiin darbaa jiru kun sababa tokko tokkoon qulqullina sadarkaasaa eeggateen darbuu hindandeenye. Qulqullinni viidiyoo dalagamuu Kaameeraafi miidhagina Istiidiyoo irratti akka hundaa’u beekamadha. Kanaafuu, Kaameeraa haaraa qabaachuuf, gulaalasaa caalaatti miidhagesinee Istuudiyoosaa sirreeffachuufi kan kana fakkaataniif tumsa maallaqaa kan daawwattootakoo barbaachiseera. Kanaafuu Oromoon keessumaa Oromiyaan ala jirtan kamuu kennaa al TOKKICHAA kana qofa miidiyaa keessaniif akka arjoomtan kabaja olaanaan singaafadha.
Arjooma maallaqaan cinattis arjooma beekumsaa, qeeqaa, Youtube’ keenyaa ‘Subscribe’ gochuufi ‘page’ keenya ‘Like fi Share’ gochuun tumsa yaadaafi haamilee akka naaf taataan jaalala Oromummaan isin gaafadha!